स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय - विकिपीडिया
निर्देशांक: 37°26′N 122°10′W﻿ / ﻿37.43, -122.17
Suburban, ८,१८० acres (३३.१ km2)
Cardinal red and white एथलेटिक्स
लेलैंड स्टेनफोर्ड जूनियर विश्वविद्यालय , जसलाई सामान्यतः स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय या स्टेनफोर्ड को रूपमा संदर्भित गरिन्छ, एक निजी अनुसन्धान विश्वविद्यालय हो, जो स्टेनफोर्ड, केलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका, मा स्थित छ। यस विश्वविद्यालयको स्थापना 1891 मा कैलिफोर्निया को रेलरोड व्यवसायी लेलैंड स्टेनफोर्ड द्वारा गरियो जसको नामकरण उनको मृत छोराको नाममा गरियो। यसको पूर्व विद्यार्थीहरुले ह्युलेट-पेकर्ड, इलेक्ट्रनिक आर्ट्स, सन माइक्रोसिस्टम्स, एनवीडिया, याहू!, सिस्को सिस्टम्स, सिलिकन ग्राफिक्स, सनरन, र गूगल कम्पनीको स्थापना गरेका छन।
स्टेनफोर्डमा, संयुक्त राज्य अमेरिका र विश्व भरीबाट लगभग 6,800 पूर्वस्नातक र 8,300 स्नातक विद्यार्थीहरुको भर्ती गरिन्छ। विश्वविद्यालय धेरै स्कूलहरुमा विभाजित छ जसमा स्टेनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल अफ बिजनेस, स्टेनफोर्ड ल स्कूल, स्टेनफोर्ड स्कूल अफ मेडिसन र स्टेनफोर्ड स्कूल अफ इंजीनियरिंग शामिल छ।
अकेडमिक रैंकिंग अफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज द्वारा स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालयलाई विश्वमा दोश्रो स्थानमा राखिएको छ, र U.S. न्यूज & वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा यसको स्नातक कार्यक्रमलाई देश भरमा चौथो स्थान दिईएको छ।
विश्वविद्यालयको कुलसम्पत्तिमा US$12.6 बिलियन दान शामिल छ, जो कुनै पनि शैक्षणिक संस्थानको मामिलामा तेश्रो सबभन्दा विशाल हो।
स्टेनफोर्डको एथलेटिक कार्यक्रमले पछिल्लो पन्ध्र बर्षको प्रत्येक NACDA डाइरेक्टर्स कप जितेको छ। पेसिफिक-10 कन्फ्रेंस मा प्रतिस्पर्धा गर्ने दुई निजी विश्वविद्यालयहरुमा, स्टेनफोर्डको मुख्य एथलेटिक प्रतिद्वंद्विता काल को साथ हुदछ।
१.१.२ प्रारम्भिक वित्तीय व्यवस्थापन
१.२ 20 औं शताब्दी
१.२.२ हूवर इंस्टीट्यूशन
१.३ 1945 को पछि
१.३.१ जीव विज्ञान
१.३.२ उच्च प्रबिधि
२.१ प्रसिद्ध स्थल
२.२ संकाय निवास
२.३ गैर-मुख्य परिसर
२.४ स्टेनफोर्डमा संपोषणीयता
३ प्रशासन र संगठन
४.१ अनुसन्धान केन्द्र र संस्थान
४.२ पुस्तकालय र डिजिटल संसाधन
४.३ विद्यार्थी निकाय
५ वृत्तिदान र अनुदान संचयन
६.१ शयनगृह र विद्यार्थी आवास
६.३ यूनानी जीवन
६.४ विद्यार्थी समूह
६.५ परिसरको लोकप्रिय अड्दा
८ उल्लेखनीय पूर्व विद्यार्थी, संकाय, र स्टाफ
स्टेनफोर्डको स्थापना एक रेलरोड दिग्गज, संयुक्त राज्यको सीनेटर र कैलिफोर्नियाको पूर्व राज्यपाल लेलैंड स्टेनफोर्ड द्वारा गरिएको थियो, जनको श्रीमतीको नाम जेन स्टेनफोर्ड थियो। यसको नामाकरण उनीहरुको एकमात्र छोरा लेलैंड स्टेनफोर्ड, जूनिअर को सम्मानमा राखियो, जो आफ्नो १६ औं जन्मदिन भन्दा ठीक पहिले मृत्यु प्राप्त भयो। उनको आमा-बुबाले एक विश्वविद्यालयलाई आफ्नो नै छोरोलाई समर्पित गर्ने फैसला गरियो र लेलैंड स्टेनफोर्डले आफ्नो पत्नीसंग भने कि, "कैलिफोर्निया को केटा केटी हाम्रो केटा केटी हुनेछन।"
सीनेटर र श्रीमती स्टेनफोर्डले हार्वर्ड को राष्ट्रपति इलियट संग भेटघाट गरे र सोधे कि पालो अल्टो मा हार्वर्ड जस्तो स्थापना गर्नमा कति लागत लाग्छ। इलियटले भने कि उनको हिसाबबाट $15 मिलियन पर्याप्त हुन्छ। तर पनि, कर्नेल विश्वविद्यालय को प्रेसीडेंट ए.डी. व्हाइट लाई स्टेनफोर्डको संस्थापक अध्यक्षको रूपमा ल्याउने स्टेनफोर्डको इच्छालाई सम्मानपूर्वक नकार दिईयो।  तर यसको सट्टा व्हाइटले डेविड स्टार जोर्डन लाई सिफारिश गरे, जो कि व्हाइटको पूर्व विद्यार्थी एवं इंडियाना विश्वविद्यालय को प्रेसीडेंट थिए। स्टेनफोर्डको निर्देशनको लागी त्यो ईनको अंतिम विकल्प थियो, जबकी दुई पटक उनले आइवी लीग को अग्रणिहरुलाई उनीहरुको तलबमा आउने प्रश्ताव गरेका थिए।.
स्थानीय मानिस र विश्वविद्यालय समुदायको सदस्य स्कूललाई द फार्म को रूपमा उल्लिखित गर्दछन। , जो यस तथ्यको तर्फ इशारा गर्दछ कि यो विश्वविद्यालय यस्तो स्थानमा स्थित छ जहां पहिले लेलैंड स्टेनफोर्ड को घोडाको फार्म थियो।
स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालयको आदर्श वाक्य "Die Luft der Freiheit weht" (डी लुफ्ट डेर फ्राइहाइट वेट) प्रेसीडेंट जर्डन द्वारा छनिएको हो। यो जर्मन बाट अनुवादित हो, यस उद्धरण उलरिश फौन हट्टन को अर्थ हो "स्वतंत्रताको हवा बग्दछ। " यो आदर्श वाक्य प्रथम विश्व युद्ध को बेला तब विवादास्पद थियो जब जर्मनीमा हर चीज मा संदेह गरिन्थ्यो; त्यस समय विश्वविद्यालयले यस कुराबाट इन्कार गर्यो कि यो उसको आधिकारिक आदर्श वाक्य हो। 
विश्वविद्यालयको संस्थापक अनुदानलाई 11 नवंबर, 1885 मा लेखियो, र प्रथम न्यासी बोर्ड द्वारा 14 नवंबर को स्वीकार गरियो। 14 मई, 1887 को आधारशिला रखी गई र योजना र निर्माणको छ बर्ष पछि विश्वविद्यालयलाई आधिकारिक रुपमा मा 1 अक्टूबर 1891 को खोलियो, जसमा 559 विद्यार्थी र 15 शिक्षक थिए जसमा सात कार्नेल बाट थिए। जब स्कूल खोलियो तब विद्यार्थीहरुबाट ट्यूशन को लागी राशी लिईएन, यो व्यवस्था 1930 को दशक सम्म चल्यो। प्रथम वर्गको विद्यार्थीहरुको बीच भविष्यको भावी राष्ट्रपति हरबर्ट हूवर थिए, जसले पछि स्टेनफोर्डको यस्तो एकमात्र विद्यार्थी भएको गौरव प्राप्त गरेको दावा गरे, जो प्रथम वर्गको छात्रावासमा सुत्ने प्रथम विद्यार्थी थिए।
मूल 'इनर क्वाड' भवन (1887-1891) को डिजाइनको निर्माण फ्रेडरिक ल ओमस्टेड, फ्रांसिस ए. वल्कर, चार्लेस अलेरटन कूलिज, र स्वयं लेलैंड स्टेनफोर्डद्वारा गरिएको थियो।
स्कूललाई एक सहशिक्षा संस्थाको रूपमा स्थापित गरिएको थियो। जबकी, महिलाहरुद्वारा ठुलो संख्यामा दाखिला लिएको कारणले चाडै नै जेन स्टेनफोर्डले एक नीतिको शुरूआत गरे जसको अन्तर्गत केवल 500 महिला विद्यार्थी नै दाखिला लिन सक्द थिए। उनी चाहदैन थिईन थी कि यो स्कूल "द वस्सर अफ द वेस्ट" बनोस किनकी उनीले महसूस गरिन कि यस्तो हालतमा यो उनको छोराको लागी एक उपयुक्त स्मारक बन्ने छैन। 1933 मा यस नीतिलाई को संशोधित गरियो जसको अन्तर्गत पूर्व स्नातक को लागी स्त्री पुरुषको अनुपात 3:01 निर्दिष्ट गरियो। 3:1 को "स्टेनफोर्ड अनुपात" 1960 को दशकसम्म बनाई राखियो।
1960 को दशकको अन्तसम्म पूर्व स्नातकको "अनुपात" लाई 2:1 राखियो, तर मानविकीमा छोडेर स्नातक स्तरमा यो अनुपात धेरै विषम भयो। 2005 सम्म, स्नातक नामांकनको लागी लिंगको बीच विभाजन लगभग समान भयो, तर स्नातक स्तरमा पुरुषहरुको संख्या महिलाहरुको तुलनामा बढेर लगभग 2:01 भयो।
प्रारम्भिक वित्तीय व्यवस्थापन[सम्पादन गर्ने]
जब सीनेटर स्टेनफोर्डको मृत्यु 1893 मा भयो तब विश्वविद्यालयको सतत् अस्तित्व खतरामा थियो। सीनेटर स्टेनफोर्डको $15 मिलियनको संपत्तिको बिरुध्द सरकारी मुद्दामा र साथ साथै 1893 को खलबली को कारण यसको खर्चलाई चलाउन धेरै मुश्किल भएको थियो। न्यासी बोर्डको अधिकांश सदस्यहरुले आर्थिक स्थितिको समस्याको हल नभएसम्म यसलाई अस्थायी रूपबाट बंद गर्ने सलाह दिए। जबकी, जेनले स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालयको संचालनलाई जारी राख्नेमा जोर दिईन। विश्वविद्यालयको वित्तीय बर्बादीको संभावित आशंकाको पछि उनले 1893-1905 सम्म विश्वविद्यालयको आर्थिक, प्रशासनिक, र विकास मामिलाको प्रशासन आफ्नो हाथ मा लिईन; र एक आमा र एक गृहिणीको आफ्नो अनुभवको आधारमा उनले यसलाई एक परिवारको रूपमा चलाईन। अगाडिका धेरै वर्षहरुको लागि, उनी आफ्नो निजी सम्पत्तिबाट तलबको भुगतान गर्दै रहिन, यहाँ सम्म कि विश्वविद्यालयलाई चलाउनको लागी उनले आफ्नो गहना सम्मलाई धरौटी राखिन। जब मुद्दालाई 1895 मा समाप्त गरियो, त्यस दिन विश्वविद्यालयमा छुट्टी घोषित गरियो।
एडवर्ड अल्सवर्थ रस ले अमेरिकी समाजशास्त्रको संस्थापक जनकको रूपमा ख्याति प्राप्त गरे, तर 1900 मा जेन स्टेनफोर्डले अतिवाद र नस्लवादको लागी उनीहरुलाई निकालि दिईन र एक प्रमुख शैक्षणिक स्वतंत्रताको मामिलालाई शुरू गरिन।
जेन स्टेनफोर्डको कार्रवाई कहिले कहि सनकी थिए। 1897 मा, उनले बोर्डको न्यासीकरुलाई निर्देश दिईन "कि विद्यार्थीहरुलाई यो पढ़ाईयोस कि धरतीमा पैदा भएका हरेक व्यक्तिमा एक आत्माको रोगाणु हुदछ, र यो कि त्यसको विकासमा नै, यहांको जीवन र अनन्त जीवन निर्भर गर्दछ।  उनले लाइफ-ड्राइंग कक्षामा नग्न प्रतीकको स्केच गर्नबाट विद्यार्थीहरुलाई मनाई गरिन, परिसरमा ऑटोमोबाइलमा प्रतिबंध लगाईन, र एक अस्पताल बनाउने अनुमति दिनबाट मनाई गरिन ताकि मानिसहरु बीच यो धारणा नबनोस की स्टेनफोर्ड अस्वास्थ्यकर छिन। 1899 र 1905 को बीच, उनले स्टेनफोर्ड परिवारको लागी एक स्मारकको रूपमा एक भव्य भवनको निर्माण गरे जसको लागत $3 मिलियन थियो, जबकि विश्वविद्यालय संकाय र स्वावलंबी विद्यार्थी गरीबीमा रहि रहेका थिए।
20 औं शताब्दी[सम्पादन गर्ने]
1906 सेन फ्रांसिस्को भूकंपको पछि स्टेनफोर्ड लाइब्रेरीको खंडहर
1906 सेन फ्रांसिस्को भूकंप बाट मुख्य भाग (जसमा मेमोरियल चर्च को मूल पुनरावृति पनि शामिल थियो) साथ साथै vah गेट जो स्कूलको प्रवेश द्वारलाई चिन्हित गर्दछ, नष्ट भयो, बृहत् मात्रामा पुनर्निर्माणको काम तुरंत नै शुरू गरियो।
1906 बाट 1919 मा धेरै प्रकारको समस्याहरुको कारण, इंटरकलेज फुटबललाई संकटबाट जुझ्नु पर्यो। जबकि केही कलेजहरु मध्येबाट फुटबललाई पुरै तरहबाट हटाईयो, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय र स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय जस्ता केही संस्थाहरुमा फुटबललाई हटाएर त्यसको सट्टा अंग्रेजी रग्बीलाई राखियो। 1906 बाट 1914 मा दुई स्कूलहरुमा रग्बी को प्रमुख खेलको रूपमा खेलिदै रहियो, तर उनहरुले चाडै नै पाए कि फुटबलको आपत्तिजनक व्यवहारहर्लाई रग्बी मा पनि शुरू गरिन लागियो। अंततः, जब फुटबलको नियमहरुलाई बदलियो तब फुटबलको तर्फ फिर्ताको रुख शुरू भयो, जसले अंतर कलेज खेललाई पुनः स्थापित गर्यो र विद्यार्थीहरु र पूर्व विद्यार्थीहरुलाई फुटबलको साथ जोडिनमा सक्षम बनायो जो एक अमेरिकी खेल थियो।
हूवर इंस्टीट्यूशन[सम्पादन गर्ने]
स्टेनफोर्डमा हूवर इंस्टीट्यूशन (पूरा नाम: द हूवर इंस्टीट्यूशन ऑन वार, रेवलुशन एण्ड पीस) को हरबर्ट सी. हूवर द्वारा स्थापित गरिएको थियो, जो स्टेनफोर्डको प्रथम स्नातकहरु मध्ये एक थिए। 1928 मा उनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिको रूपमा चयनित हुनु भन्दा पहिलो प्रथम विश्व युद्धको पछि यूरोपमा अमेरिकी राहत प्रयासको उनी प्रभारी थिए। हूवरले समकालीन इतिहासको रिकर्डलाई दर्ज गर्ने आफ्नो प्रयोजनलाई व्यक्त गरे जस्तो त्यो घटित भै रहेको थियो। हूवरको सहायहरुले उनको वृत्तचित्र र दुर्लभ मुद्रित सामग्रीको लागी अक्सर आफ्नो जीवनलाई जोखिममा हाले, विशेष रूपबाट नाजी या साम्यवादी शासनको तहत देशहरुबाट। उनीहरुको धेरै सफलताहरुमा मा रोजा लक्समबर्ग को पत्र, द गोबेल्स डायरी र पेरिसमा रूसी गुप्त पुलिसको रिकर्ड शामिल छ। , हूवरको प्रभाव अन्तर्गत अनुसन्धान संस्थानों को पनि स्थापित गरियो, जबकी निश्चित रूपबाट मूविंग फोर्स, हूवर, र मेजबान विश्वविद्यालयको बीच संघर्ष भै रहेको थियो। 1960 मा, डब्ल्यू. ग्लेन कैम्पबेल को निदेशकको रूप मा नियुक्त गरियो र चाडै नै पर्याप्त बजेटमा बढ़ोतरी हुई जो अधिग्रहण र संबंधित अनुसन्धान परियोजनाओं मा अनुकूल बढ़ोतरीको तर्फ अग्रसर हुई. 1960 को दशक मा विद्यार्थी अशांतिको बावजूद संस्थाले स्टेनफोर्डको साथ घनिष्ट संबंध को बढ़ाए र विकासलाई जारी राखे। विशेष रूपबाट, चीनी र रूसी संग्रह मा काफी वृद्धि भयो।. खास गरेर 1980 को पछिबाट वाशिंगटनको सम्बन्धको साथ संस्थान तेजसंग एक रूढ़िवादी विचारक बनाउदै गयो। यो विश्वविद्यालयको एक अभिन्न अंगको रूपमा जारी रहयो।
1945 को पछि[सम्पादन गर्ने]
जीव विज्ञान[सम्पादन गर्ने]
1946 बाट 1972 सम्म जैविक विज्ञान विभागमा तेजसंग विकास भयो किनकी यसको अनुसन्धानको केन्द्र बिन्दु बदलियो जसको कारण थियो शीत युद्ध र अन्�